Isikhungo Sokuzivocavoca Gym Star Gym - Messina
Isikhungo Sokuqina se-ASD Palestra Star Gym Fitness - Messina
Zinakekele futhi uncike kochwepheshe bokuqina komzimba
4.1 /5 amavoti (amavoti angama-8)
Isikhungo Sokuzivocavoca ASD Star Gym, ngo-E Fermi 20 a Messina, igcobisa ukunikezwa kwezifundo, okokusebenza kanye nochwepheshe we Ukufaneleka uhlukile kulo lonke idolobha. Ukulungiselela nokubonisana kuqashwa ngobuhle ku Gym, Ukuma, Ukuqina nezifundo zazo zonke izinhlobo, kufaka phakathi Ukuzivikela, ngemiphumela emangazayo. Joyina Umndeni we Isikhungo Sokuqina Komzimba we-Star Gym.
Isikhungo Sokuqina se-ASD "Star Gym" eMessina - Ukuqina Komzimba
ASD "Star Gym" eMessina kungukuthi Isikhungo sokufaneleka oqeqeshiwe futhi ohlomile, oziqhenya ngamakhasimende athembekile futhi anelisekile ngemiphumela etholwayo Ukufaneleka elenziwe elenziwe elenziwa ngabantu uqobo nelinakekelayo emkhakheni wezolimo. Thatha ithuba elilodwa I-Palestra okuphelele, kwekhono kokuzivocavoca kwe Ukulungiswa kokuma, kuyajabulisa kepha kuyasebenza I-Zumba, Dance nezifundo eziwusizo Izifundo ze Ukuzivikela kuvulekele bonke.
Isikhungo Sokuqina se-ASD "Star Gym" - Izinsiza Nezazi
ASD "Star Gym" Fitness Center yindawo yokuzivocavoca phakathi kokuhle kakhulu kwe Messina, esiseduzane nendawo ephakathi nedolobha le-Strait. Uma unendaba ngesimo sakho noma ufuna ikhambi lokubuyisa ukubukeka kwakho kahle noma uvele nje uzifune ukuzijabulisa, indawo yokudlala ehlanganisa ibhizinisi ngentokozo, lapho-ke Isikhungo Sokuzivocavoca se-ASD "Star Gym" yindawo yakho. Abasebenzi abangochwepheshe nabaqeqeshiwe Umqeqeshi womuntu siqu uzokulandela ngekhono nenjabulo kweyakho Ukulungiselela Abasubathi noma umane nje usendleleni ngezeluleko nokuzivocavoca umzimba, noma ngosizo lwamadivayisi asebenza kahle kakhulu nanamuhla emhlabeni Ukufaneleka, ehambisana nabasebenzi abakwazi ukunikeza izeluleko eziqondene nomuntu uqobo emkhakheni we Ukudla Kwezemidlalo ed ukuphazamiseka.
ASD "Star Gym" Fitness Center - Gym, Posture Correction kanye nokuzivikela
Isikhungo sokuqinanodumo edolobheni lase Messina, ASD Inkanyezi Gym inikeza wonke umuntu ithuba lokunikeza imizimba yabo nokuqina kwabo kochwepheshe ku Ukufaneleka, abaqhosha ngolwazi nobungcweti emkhakheni. I-Palestra ifakwe imishini yakamuva yesizukulwane nobuchwepheshe, Star Gym ASD futhi siyisikhungo esikhethekile ku Ukulungiswa kokuma nendawo yokuhlangana neyokuzijabulisa ngezifundo zayo ezinamandla nezijabulisayo. Star Gym ASD "Isikhungo Sokuqina" futhi:
Ukwakha Umzimba, Ukuzilolonga kweCardio, Ukujikeleza Umjikelezo, Umdanso Wanamuhla Wabantu Abadala Nezingane, I-Fit Ball kanye neFit Repound, Ukumiswa, Ukubekwa kweToning, i-Key Boxing kanye Nokuzivocavoca Ukuhamba. Qeqesha umzimba wakho futhi Izifundo Zokuzivikela ifundiswa ngochwepheshe abakhethekile.
ASD "Star Gym" Fitness Center eMessina - Okomzimba wakho noma Isikhathi sakho sekhwalithi
Isikhungo Sokuqina Somzimba se-Star Gym ASD, ngo-E Fermi 20 a Messina, iyona ehamba phambili ekubonisaneni nasebusheni ku Ukufaneleka ngesidingo ngasinye. Ngenxa yamakamelo ahlonyisiwe futhi ngaphezu kwakho konke kubasebenzi abanolwazi nabanekhono uzoba nakho konke okudingayo ukuze ubuyele esimweni sakho esihle noma umane unikele isikhathi sekhwalithi kuwe. Hhayi kuphela I-Palestra con izifundo kuko konke ukunambitheka nezidingo, ASD Inkanyezi Gym nakho okuhlangenwe nakho kokuzivocavoca kwe Ukuma, okuhloswe ngalo ukulungisa izinkinga zakho ngokuzivocavoca okuthile, Amathiphu Wokudla Okomuntu Okwenziwe Nguwe kanye ne-Exam ye ukuphazamiseka, ngokulinganisa ukwakheka komzimba. Ukuze inhlala-kahle yomzimba wakho, thembela kubuchwepheshe be ASD Isikhungo Sokuzivocavoca Sokuzivocavoca eMessina.
Ikheli: UVia E. Fermi, oneminyaka engama-20
Umakhala ekhukhwini: 393 4689211
Inombolo ye-VAT: 97076070834